နေ၀န်းနီ နဲ့ “အ​ကောင်းမမြင်​” ဝါဒ -၂ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ​နေ၀န်းနီ နဲ့ “အ​ကောင်းမမြင်​” ဝါဒ -၂
​နေ၀န်းနီ နဲ့ “အ​ကောင်းမမြင်​” ဝါဒ -၂
Posted by naywoon ni on Mar 6, 2015 in Creative Writing, Drama, Essays.., My Dear Diary |9comments
​နောက်​ထပ်​ ​နေ၀န်းနီ အ​ကောင်းမမြင်​နိုင်​တဲ့ ကိစ္စ တစ်​ခုက ဘာသာ​ရေးဘက်​ နွယ်​တဲ့ ဓမ္မ သီချင်း​တွေနဲ့ ဗွီဒီယို ရုပ်​ရှင်​ ဇာတ်​လမ်း​တွေပဲ ။ တရားဓမ္မ က ​ဟော​ပြောပြသထားသမျှ ကိုယ်​လိုရာ အယူအဆ​တွေ သွတ်​သွင်းပြီး ဇွတ်​အတင်း လုပ်​ဖန်​တီးပြီး ပြသ​နေတာ​တွေ ။ သီဆို​နေတာ​တွေက စိတ်​ညစ်​ညူးဖွယ်​​တော်​​တော်​​ကောင်းပါတယ်​ ။ မသိနားမလည်​​သေးတဲ့ က​လေးငယ်​​တွေနဲ့ ဘာသာ​ရေး ကိုယ်​ခံအား နည်းတဲ့သူ​တွေ ဘာမဆို အထူးအဆန်း ဆိုယုံလွယ်​တတ်​တဲ့ ​တောသူ​တောင်​သား​တွေအတွက်​ သူတို့တစ်​​တွေရဲ့ အယူအဆ ချွတ်​​ချော်​ တိမ်းပါးသွား​စေပြီး တစ်​သက်​လုံး အမှားကို အမှန်​ထင်​ပြီး ပြုမူ လုပ်​ကိုင်​သွားမယ်​ဆိုရင်​ အဲ့ ပတ်​၀န်းကျင်​တစ်​ခုလုံးဟာ ဘယ်​လိုမှ အစွဲ ချွတ်​မရတဲ့ အယူသီး မှု​တွေ ဖုံးလွှမ်း ​နေမှာပါပဲ ။ အယူအဆ အမျိုးမျိုး သွတ်​သွင်း ပြသ သီဆို တီးမှုတ်​​နေသူ​တွေဟာ ဘာသာ​ရေးရဲ့ ဓမ္မ အန္တာရယ်​​ကောင်​​တွေပါပဲ ။ သာသနာ ဖျက်​တပ်​ဖွဲ့ ရဲ့ ​ရှေ့တန်းတိုက်​စစ်​မှူး​တွေပါပဲ ။။ဒါ​တွေဟာ ဘယ်​သူ့ တာဝန်​လဲ ¿ ဘယ်​သူမှ မစီ စစ်​ကြ​တော့ဘူးလား ¿ ​သေချာတာက​တော့ ” ငါ့ကို မဆန့်​ကျင်​ရင်​ပြီး​ရော မင်းတို့ဖာသာ ကြိုက်​သလို ကိုးကွယ်​ သာသနာပျက်​တာ မပျက်​တာထက်​ ငါ့ ​နေရာ မြဲဖို့ လိုတယ်​ ” လို့ ​တွေး​နေတဲ့ အာဏာ ရှင်​အစိုးရလား ?
” မင်းတို့ ​လောကီ ဘက်​က ​ရေး​နေတာ တို့နဲ့ မဆိုင်​ဘူး​လေကွာ ” လို့ ​ပြောမဲ့ သာသနာ့ ၀န်​ထမ်း​တွေလား ။ ငရဲ ဆို​ကြောက်​ နတ်​ပြည်​ပဲ ​ရောက်​ချင်​တဲ့ အတ္တသမား​တွေ​ကြောင့်​လား ?
” စည်းဇိမ်​ဥစ္စာ တိုးမှာ ရွတ်​ကြပါ ​အြောင်းန​မော ဂါထာ ” ဆိုလား ဘာဆိုလား ? စည်းစိမ်​ ဥစ္စာပဲ တိုးဖို့ရွတ်​မလား အဲ့သလိုဆိုလည်း ဗုဒ္ဓ ဘာသာ အမည်​မခံနဲ့​လေ ။ ​နောက်​ သီချင်း​တော်​​တော်​များများ ရှိပါ​သေးတယ်​ ။ ချပြ​နေရင်​ ကိုယ့်​​ပေါင်​ကိုယ်​ လှန်​​ထောင်းသလိုဖြစ်​မှာစိုးလို့ ။ ​နောက်​ ဗွီဒီယို ​ပေါ်ဦးစက ဟိုသမိုင်း ဒီသမိုင်း ကား​တွေ အ​ခြေမမြစ်​မရှိတဲ့ ဒဏဋာရီ ​တွေကိုယူပြီး ရိုက်​ထား​လေ​တော့ ဇာတ်​လိုက်​ ဒုက္ခ ​ရောက်​တိုင်း သကြားမင်းက လာလာကယ်​​နေရတာ ။ သကြားခမျာ နတ်​စည်းစိမ်​ခံစား​ရဖို့ အချိန်​​တောင်​ရှိရဲ့လားမသိ ။ ခု​တစ်​​လော ​တွေ​နေရပြန်​ပြီ ။ စဂိုင်းပျက်​က လွင့်​​နေတဲ့ တံငှာ ဇာတ်​လမ်း​တွေ ။ ဘာသာ​ရေးနဲ့ ပတ်​သက်​ပြီး ကိုယ်​လိုရာ ဆွဲယူရိုက်​ပြ​နေတာ အကြည့်​ရ​တော်​​တော်​ ဆိုးတာပဲ ။ မြန်​မာပြည်​မှာ ဘာသာ​ရေး ပျက်​လိုပျက်​စီး ဖြစ်​​အောင်​လုပ်​​နေတာ အဓိက တရားခံက ဒင်းတို့ပဲ ။ ထွက်​ရှိသမျှ ဘာသာ​ရေးနွယ်​ သီချင်း ဗွီဒီယို ဇာတ်​လမ်းမှန်​သမျှကို စီစစ်​​ ခွင့်​ပြု ​ပေးမဲ့ အဖွဲ့ တရား ဓမ္မ အမှန်​ တည့်​မတ်​​ပေးမဲ့ အဖွဲ့ တစ်​ခု ရှိရင်​​ကောင်းမလားလို့ပါ ။။
ရုပ်ရှင် ၊ ဗီဒီယိုလောကကိုတော့ ပိုးစိုးပက်စက်ပြောပစ်ချင်နေတာတွေ တပုံကြီး…
ဗွီဒီယို ကား​တွေမှာ အ​ခြောက်​ကား​တွေ အရွံ ဆုံးပဲ ။ ဟာသ မင်းသား​တွေတင်​မဟုတ်​ အားလုံး အ​ခြောက်​လုပ်​ပြီး မရိုက်​ဖူးတဲ့ မင်းသားကိုမရှိ​တော့ဘူး ။ ရိုက်​လိုက်​ရင်​လည်း ​ပေါ့ရွတ်​ရွတ်​နဲ့ ကြည့်​မရ ။ တစ်​ချိန်​က မင်းသားကြီးရဲ့ ​ဒေါင်း​ယောင်​​ဆောင်​​သောကျီးနဲ့ အနာဂါတ်​ ဟင်းလင်းပြင်​က လွဲရင်​​ပေါ့​လေ ။ အဲ့ အ​ခြောက်​ကား​တွေကို ပိုးစိုးပက်​စက်​ ​ဝေဖန်​ကြည့်​ပါလား ။ သို့​ပေမယ့်​ မင်း​ဝေဖန်​လို့လည်း ရုပ်​ရှင်​​လောက ​ပြောင်းလဲ သွားမည်​​တော့ မဟုတ်​
အရင်က မေတ္တာပို့လောက်ပဲ သီချင်းလိုဆိုတယ်။
ခုတော့ မနက်ပိုင်း FM တွေမှာ လာနေတဲ့ တရားဓမ္မတွေကို သီချင်းလုပ်ဆိုနေတာတွေ ကြားရတာ အဂါရ၀ဖြစ်တယ်ထင်ပြီး မကြိုက်ဘူး။
ဒါ့ကြောင့်လည်း ပဟာသ ငရဲ ဆိုတာရှိတယ်လို့ ပြောတာနေမှာပေါ့။
အောင်ခြင်းရှစ်ပါး၊ပါရမီဆယ်ပါး လို သီချင်းမျိုးတွေ
ခုနောက်ပိုင်းလည်း ကိုင်ဇာတို့ ဆိုတဲ့ မျက်နှာသစ်လျှင်ရေကိုမြင်၊မြင်စဉ် မေတ္တာပို့ပါမယ်.. ဆိုတဲ့ သီချင်းခွေ လည်းကောင်းသားပဲ။
အနုပညာသည်တွေမှာ လူတွေ အမှားကို အမှန်မထင်စေဖို့ တာဝန်သိပ်ကြီးပါတယ်။
ကိုကိုဝီ လူထွက်​ပီး ရုပ်​ရှင်​ရိုက်​ သီချင်းဆို​တော်​မူသင့်​ပါ​ကြောင်း
အစကတည်းက ပျက်​တက်​တက်​ပါဆို လွှင့်​ပစ်​ရ​အောင်​​မြှောက်​​ပေး​နေပြန်​ဘီ ​မောင်​ဂီ နီ​တော်​​တော်​ ရွဲတဲ့တဲ့​ပြော ဟင်းးးးးးး
ကျွန်မ က ငယ်ကထဲ က ဂွစာမမ မို့ ဘုန်းကြီး တွေတရားဟောရင် အကုန် နာလို့ မရဘူး။
ကြာနီကန် တရား ဆို ကြိုက်လိုက်ကြတာ။
ဒါ တရားမှ မဟုတ်တာ။ ဘုန်းကြီး ကွက်စိတ် ဆရာ ဖြစ်နေတဲ့ ပုံစံ လို့ ဝေဖန်လေ့ရှိတယ်။
သူ့တရားထဲ ရှိသေး။ ဟို အဒေါ်ကြီး မလှူချင် အထုတ်ကြီး တပြင်ပြင် အထုတ်ရှင်သေလို့ သွား ကျန်တဲ့ သူတွေ ဝေလို့စား ဆိုတာမျိုး။
ကျန်တဲ့ သူတွေ စားရတော့ ရော မကောင်းဘူးလား။
မိုးကုတ်ဆရာတော် တရား ကို တော့ အတော်လေး သဘောကျတယ်။
ဆရာတော်ကြီး က အလှူဒါန က သံသရာဆက်တာမို့ သံသရာပြတ်အောင် ကြိုးစားကြစမ်း လို့ ဟောတာ အမြဲ အမှတ်ရတယ်။
တကဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာ ကို ကမ္ဘာ က လူ တွေ ကို နားလည်စေချင်ရင်၊ သာသနာပြု ချင်ရင် ပုံတွေ ဝတ္တု တွေ နဲ့ ပြောပြနေလို့ မရဘူး။
ဒီမှာတော့ ကျွန်မလဲ တစ်ချို့ တရား တွေ ကို အကောင်းမမြင်ဘူး။
ဘာသာ ထိ ဒါးးးးးးကြည့်နော် ကိုနီ
ဘာသာရေး နဲ့ နိူင်ငံရေးဟာ ငြင်းစရာ အများဆုံး
ဒါပေမယ့် ကျနော် မငြင်းချင်ဆုံး
မြန်မာရုပ်ရှင်ကတော့ မောင်ဝဏ္ဏတို့ မောင်တင်ဦးတို့ရိုက်သွားတဲ့ကားတွေနောက်ပိုင်း
ဘာကားမှ လောက်လောက်လားလားမရှိ ဇာတ်ညွှန်းနတ္တိ
ရိုက်ကွင်းရောက်မှ ရိုက်ညွှန်းဆိုတာလေးဖတ် သရုပ်ဆောင်ရတော့လည်း
သောက်ကျိုးနည်းတာ ဆန်းသလားဗျာ ၊